धेरै कुरा थाहा छ, रूसी थिएटर र सिनेमामा एक प्रसिद्ध अभिनेता कन्न्स्टन्तिन खुबिन्स्कीलाई सार्वजनिक व्यक्ति होइन र प्रेसको ध्यानको प्रयत्न गर्ने प्रयास गर्दछ। तथापि, उनले धेरै लोकप्रियता प्राप्त गरे न केवल चरण मा आफ्नो प्रतिभाशाली खेल को लागि, तर पनि उन रोग को मदद को लागि जो पनि गंभीर रोगहरु देखि ग्रस्त हुन्छ। त्यो हो, जब त्यो दर्शनशास्त्रीहरूको बीचमा सामेल हुन्थ्यो, जसमा: डिना कुरुन, चोल्पा खामाटोवा, किसेनिया रापोपार्ट, मिखाइल पोरेनचेकोभ, मारिया मिरोनावा, जियानिया अल्फार्फो र अन्य धेरैजना।
आज, कन्स्टान्टिन खुबिन्स्की फाउण्डेसनले अङ्गोलोगोल छ र खतरनाक मस्तिष्कलाई क्षति पुर्याएको धेरै संख्यामा बच्चाहरूलाई मदत गर्दछ। र उनको प्रारम्भकर्ता आफ्नो सन्तानको गतिविधि बारे घण्टौ घण्टा कुरा गर्न तयार छ। यसबाहेक, उहाँले दानमा कामको दायरा विस्तार गर्न योजना बनाउनुहुन्छ, यसकारण प्रत्येक ठिकै कारण हो कि कन्स्टान्टिन खुबिन्स्की फाउन्डेसन, सौभाग्य देखि, लामो समयसम्म। निस्सन्देह, धेरै रुचि छ कि सबै कुरा सुरू भएको छ, जो प्रसिद्ध र अत्यधिक सशुल्क अभिनेता को लागि एक सहायक को रूप मा सेवा को एक फायदेमंद र कला को संरक्षक हुन को रुचि हुनेछ।
र यो घटना पछि कन्स्टस्टिन खाबसेन्सीले व्यक्तिगत दु: खको अनुभव गरे - उनको पत्नी अङ्गोलोजीको मृत्यु भएको थियो, जो कि यस रोगको विकासले केही बच्चा जन्मेको थियो।
अभिनेताले आफ्नो श्रीमतीलाई पत्नीलाई बाहिर निकाल्न सहयोग पुर्याए: उनले यसलाई महान् क्लिनिकमा परिभाषित गरे, उपचारमा उनको सबै शुल्क खर्च गरे। उहाँले आवास बेच्नुभयो, ऋण छेद मा चढ्यो र यो सबै आफ्नो पत्नी को बचाउन को लागि। तथापि, लस एन्जलस मेडिकल सेन्सरको उपचारले पनि क्यान्सरबाट लड्न मद्दत पुर्याएन, र 2008 मा अन्नास्टासा खासास्केया बित्यो ... आज, अभिनेता एक साधारण घरमा बस्छ र प्रायः सबै तिनको आय दानको लागि दान गरिन्छ।
एक पटक कोस्टांतिन एक मेडिकल सेन्टरबाट बोलाइयो जुन मान्छे लाई लेकिमिया संग व्यवहार गर्ने माहिर छ। तारको अर्को अन्त्यमा एक महिलाले उनको शोकलाई मदत गर्न आग्रह गरे: छोरासँग दुई सय हजार रूबलको लागि पर्याप्त पैसा छैन। अभिनेता को फोन उनको डाक्टरहरु द्वारा दिए गएको थियो। र खाबेन्स्कीले तुरुन्त पर्वतमा जवाफ दिए र हराएको रकम ल्याए। केटालाई समयमा सञ्चालन गरिएको थियो।
यस घटना पछि, अभिनेता धर्मार्थ गतिविधिहरुमा संलग्न रहन जारी राख्यो: फोन कल बाट फोन फोन सरल हुन्छ। उल्लेखनीय छ कि कन्स्टान्टिनले उपचारको लागि मात्र पैसा प्रदान गर्दैन, तर चिकित्सकको साथ पनि हाम्रो देशका सबै भन्दा राम्ररी क्षेत्रहरु लाई बिरामी प्राप्त गर्न को लागी। धेरैले पूंजीमा मात्र एक अपरेशन बर्दाश्त गर्न सक्दैन, तर यी दुवै तरिकाका टिकटहरूको खरीद पनि।
यदि यो यस सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तिको मदतको लागि होइन जो आफ्नो पत्नी गुमाए, त्यसपछि सबै जीवित बचाइने छैन।
दानिय संरचनाको निर्माण
2008 मा, अभिनेता कोन्स्टेंटिन खुबिन्स्की फाउंडेशन बनाउन को लागी निर्णय गर्दछ। प्रारम्भिक रूपमा, उनका कर्मचारी दुई व्यक्ति थिए: सीधा रूपमा संस्थापक र उनको सहायक। अभिनेता एक कठिन समय थियो: तिनले लगातार सोधे कि वित्तीय मुद्दा कसरी हल गर्ने, अधिकारीहरूलाई स्वागत गर्न गएका छन्, डाक्टरका कार्यालयहरुमा धकेल्दै ... यसको गतिविधि शुरुमा कन्स्टान्टिन खुबिन्स्की फाउण्डेशनले लक्षित सहायता प्रदान गर्यो, र यसको आयोजकले यसको क्रियाकलापलाई विज्ञापन गर्दैन। केहि समय पछि अभिनेताले आफ्नो परियोजनालाई साधारण जनतालाई प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरे।
खाबेन्स्कीको दिमागको पहिलो भागमा राजधानीको गोरखा पार्कमा मस्लाइनेट्टा उत्सवको दिनमा आयोजित गरिएको थियो। अभिनेताले आफ्ना साथीहरूलाई बच्चाहरु संग पार्क मा स्केटिङ गर्न को लागी बुलाया। त्यहाँ पर्याप्त व्यक्ति भन्दा बढी थिए: कन्टैंटिनले उनीहरूलाई पसलमा सहयोगका साथ सहयोग गरे: इन्जेबर्ग डापकुनाइट, चाल्पा खामाटोवा, अलेक्सि क्रुचेन्को।
र प्रसिद्ध व्यक्ति स्केटर इरिना स्लाट्स्कायाले खुशीसाथ सबै हास्यहरू सिकाउँछन्, खाबसेन्सी, धेरै पाठकहरू समेत। सामान्यतया, सबैको साथमा आनन्दित रमाइलो थियो र सकारात्मकको ठूलो शुल्क पाईयो। यो छुट्टी सबै अतिथिहरूको सम्झना थियो। दान कार्यक्रमले उनको आयोजक 600 हजार रूबल भन्दा बढी ल्यायो।
यी निदान शल्यक्रिया संग रोगहरु को उपचार को लागि कन्स्टान्टिन खुबिन्स्की को धैर्य आधार मा स्थानांतरित गरियो।
कोष कोष को कोष को छ?
यसको अस्तित्वको वर्षमा, माथि उल्लेखित संगठनले एक दर्जन बच्चाहरु को जीवन बचाउन सकेन। कन्टेनटिन खाबसेन्सीलाई सहयोगका लागि कोषमा प्रायः लगानीको प्रायः जुन 16 मिलियन रुबल हुन्छ, उनी आफैले अभिनेता, साथसाथै उनको स्टिम साथीहरू, मित्रहरू र निजी कम्पनीहरू बनाइएका थिए।
धर्मार्थ संगठनको संस्थापकले भविष्यमा भने मौद्रिक सम्पत्तिका रकम बढाउनेछ, तर यसको लागि उसले काममा अर्को स्तरमा जान आवश्यक छ, र त्यो व्यावहारिक रूपमा यसको लागि तैयार छ।
यो एक पल्ट एक पत्रकार सम्मेलनमा एक पत्रकार सम्मेलनमा भनिएको थियो, जो मस्कोको सिनेमहरूमा एकको आयोजना गरिएको थियो।
पैसा कसरी वितरण गरिन्छ?
खाबेन्स्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न युरिचिच, जसको खैरिटी निषेध अक्सिकोलोजीसँग बिरामी भएकाहरूलाई सहयोग पुर्याउँदछ, केहि चिकित्सा संस्थाहरूलाई भौतिक सहयोग प्रदान गर्दछ जसले क्यान्सरको निदानमा विशेषज्ञ र मस्तिष्कको रोगको उपचार गर्दछ।
रोगीहरूको लागि रकम तिनीहरूको व्यक्तिगत जम्मामा हस्तान्तरण गरिएको छैन, तर सिधै संबोधित गर्दै संस्थामा जहाँ उनीहरूले हेरचाह गर्थे। केहि अवस्थामा, बाह्य बच्चाहरु को उपचार को लागी वित्तीय सम्पत्ति को आवंटित गरिन्छ।
दुर्भाग्यवश, अभिभावकहरू सधै धैर्य आधारमा समय नमान्छन्, त्यसैले सबैले मद्दत गर्न सक्दैनन्।
पसलमा अभिनेता र उनको साथीहरूको साथीले बारम्बार भने कि उनी "ठूलो सम्झौता" मा संलग्न छन्। बिरामीका आमाबाबुका आमाबाबुहरूले पनि धन्यवाद किन्स्टान्टिन खुबिन्स्कीको आधारमा बताउँछन्। आमाबाबु र डाडहरू समीक्षा गर्दछन्, कडा कडा परीक्षणहरू, केवल अभिनेता, मानसिक योग्यता र दयालु गर्न सक्षम छन्, वास्तवमा "महान्।"
Minimalists यी 12 कुराहरूमा खर्च पैसा सल्लाह छैन
"भइरहेको" एक गैर-राज्य पेंशन निधि हो। पैसा कसरी सङ्कलन गर्ने? समीक्षाहरू
विद्यार्थीको पोष्टकार्ड: क्रेडिटको समीक्षा र सर्तहरू
साबरबैंक को भरपूर जमाव एक रिमोट सुँगुर बैंक हो
कसरी चरण-चरण संग छोराछोरीको रेलवे locomotive आकर्षित गर्न
एक मूल्यवर्ग को सामने छेउमा। बिल को सामने मा जो पक्ष मानिन्छ?
Cataracts को मुख्य कारण के हो?
मुखासे लागि सबै भन्दा राम्रो उपाय
किशोर Rheumatoid Arthritis
म गर्भावस्था को समयमा मेरो बाल को रंग गर्न सक्नुहुन्छ? जवाफ पाइन्छ!
नमूना CV बिजुली। एक सफल रिजुम को रहस्य
Multivarka मा porridge पकाउन? घरेलू टिप